Kungani Coinbase usolwa ngokunukubeza ngokweqile inethiwekhi Bitcoin nendlela SegWit imisebenzi ? - Blockchain Izindaba
Februwari 12, 2018 admin
Kungani Coinbase usolwa ngokunukubeza ngokweqile inethiwekhi Bitcoin nendlela SegWit imisebenzi ?
Futhi mingaki Coinbase onjiniyela kudingeka ukwethula SegWit.
Ngo-February 5, lokushintshisana Coinbase Cryptocurrency ibekwe Tweet, ekwazisa ukuthi “iqembu nentuthuko esigabeni yokugcina yokuhlola SegWit”, futhi “ukuthumela nokwamukela bitcoins nge SegWit ukwesekwa izotholakala emasontweni ambalwa”.
Coinbase wamemezela umsebenzi SegWit ekuqaleni kuka-December ngonyaka odlule, ophendulayo omunye ngemibuzo embalwa evame ukubuzwa kusuka kubasebenzisi “bangaki Coinbase onjiniyela kudingeka ukwethula SegWit.”
Ngo-December 16, Coinbase iphini likamengameli Dan Romero eshicilelwe kokuthunyelwe ku esemthethweni Coinbase ibhulogi, ekwazisa ukuthi ukwethulwa SegWit ehleliwe 2018, futhi okwamanje iqembu “ukusebenza ekusetshenzisweni okuphephile SegWit.” Romero ugcizelela ukuthi “ku kuqala – ukuphepha kanye nomsebenzi kahle exchange”, futhi akakhulumi imigomo ezicacisiwe.
Nokho, phezu negagasi Disemba “Bitcoin Mania”, abasebenzisi ukunganeliseki lakhula kanye busyness inethiwekhi sika: Ukuhwebelana, kuhlanganise Coinbase futhi GDAX, abakwazanga ukuba sibhekane ngokuphumelelayo irekhodi okufunekayo waya ngaphandle kwe-intanethi, Izimali kokwenziwe isiqinisekiso isikhathi banda. Maphakathi noJanuwari, amakhasimende wathumela CEO Coinbase Bryan Armstrong sicelosikhalo ukuthi eqoqwe ezingaphezu kuka 12,000 amasignisha, obiza usekelo SegWit njengoba okubalulekile 2018. Jameson Race, unjiniyela eziholayo BitGo mfihlo isikhwama, wabiza Ukuyekwa kwezindlela amasevisi Coinbase: “Akusona ukutholakala ukuthi imbangela abalulekile overloads e inethiwekhi Bitcoin kubangelwa ezinsizakalweni ezifana adumile njengoba Blockchain.info, Coinbase kanye Gemini, okuyinto inefficiently zisebenzisa block isikhala. Uma ungafuni ukuba babe neqhaza kulokhu, ungayisebenzisi. ” Armstrong futhi basabela icala, ethi “Coinbase usebenzela packetizing ukuthengiselana, SegWit futhi eziningi nezinye amasu ukuqeda yokujama tsi e inethiwekhi.”
SegWit ihlose ukuxazulula inkinga scalability ngokunciphisa usayizi ukuthengiselana. Iziphakamiso eziyisisekelo kwahlongozwa ngunjiniyela Blockstream uPetru Wellle, kanye softphone esenza kwaba nokwenzeka ukusetshenziswa SegWit, esenzeka inethiwekhi Bitcoin ngo-Agasti ngonyaka odlule. Phakathi namasevisi kakade ukusekela ubuchwepheshe – wallets Ledger, ephephile, Electrum futhi Samourai Wallet, kanye Crypto-Ukuhwebelana HitBTC, ShapeShift futhi Bitstamp. Ukuze uqonde ukuthi SegWit kusiza inethiwekhi Bitcoin, kubalulekile ukucabanga ezingeni elula ukuphila kwansuku kwansuku bitcoin-ukuthengiselana ukuthi udabula inethiwekhi Bitcoin ngesimo “amaphakethe Imininingwane”, futhi ubuqiniso balo kanye nokunemba uhlolwa ISIZINDA. Uma zonke ISIZINDA uyavuma ukuthi kuthengiselana ilungile, ke ukuvumelana kufinyelelwe. Okwenziwayo ngokwalo liqukethe izingxenye ezimbili: input bese okukhipha – “okokufaka” futhi “Phuma”, kuyiphi ingxenye yokuqala unesibopho “Ukuvula”, leyo, ukuthola bitcoins (futhi liqukethe ulwazi mayelana umthumeli), kanti eyesibili – ngoba “ukukhiya” ngoba lokho abangase bakuthole esikhathini mpahla. Idatha okokufaka iqukethe isignesha esiqinisekisa ukuxhumana izihluthulelo ezimele nekahulumeni.
SegWit ubuchwepheshe (kuhlukaniswa uFakazi) ezidabula kuthengiselana zibe izingxenye ezimbili kanye idlulisela isignesha (“ubufakazi”) ezidingekayo “ukuvula” i-bitcoins etholwe, kuze kube sekupheleni kuthengiselana, ngaphandle block main. Esimweni esinjalo, iyunithi main iqukethe idatha mayelana umemukeli bese umthumeli, kanye “ubufakazi” iqukethe scripts amasignisha, leyo, Imininingwane edingekayo ukuze uqinisekise lokho okwenziwe, kodwa ke ngeke lisetshenziswe. Ikhumbula ukuthi amasignisha matasa mayelana 60% umthamo kuthengiselana, ngabodwa yabo iyehlisa usayizi block, ngaleyo ndlela kwande bandwidth zenethiwekhi kanye nokunciphisa izindleko amacala kuthengiselana.
2 inkampani enkulu ibhasi ...
Thumela Previous:Coincheck umemezela ukubuyiselwa kwemali luqale ngesonto elizayo
Thumela Landelayo:Mario Draghi: umthethonqubo Bitcoin akuyona umthwalo ECB sika
May 3, 2018 ngesikhathi 7:15 AM